Al Azhar oo dooneysa isbedal lagu sameeyo waxbarashada islaamiga ah!
Home Somali News Al Azhar oo dooneysa isbedal lagu sameeyo waxbarashada islaamiga ah!
Mid kamid ah hogaanka Al Azhar ayaa ku baaqay in isbedal baaxadleh lagu sameeyo waxbarashada Islaamiga ah si looga hortago kooxaha diinta Islaamka sida khaldan u adeegsada.
Shiikh Axmed Al Tayib oo ah Imamka Al Azhar horeyna u ahaa Madaxweynihii Jaamacada Al Azhar ayaa hadalkan kasoo jeediyey shirweyne looga hadlayey kooxaha Argagaxisada ah iyo saameyntooda oo Axadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Barakeysan ee Makkah Al Mukaramah.
Wuxuuna Imamka sheegay in kooxahan ay si khaldan u fasirtaan diinta Islaamka iyo Sunnada Nebi Maxamed SCW.
“….Habka kaliya oo ay muslimiinta arrintan uga hortagi karaan waa iyagoo Midooba isla maraana ka hortaga caadada khaldan iyadoo laga bilaabayo iskuulada iyo Jaamacadaha Islaamiga ah. Waa in laga gudbo in koox Muslim ah ay koox kale ka saarto diinta, falkaasi waa kan horseeday dhibaatada taagan…” ayuu yiri Shiikh Axmed Al Tayib.
Deg Deg :- Dawlada Somaliya Oo Iminka Ka Jawaabtey Talaabadii Ay Qaadey Dawlada Kenya